४५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको देशमा वार्षिक साढे ६ अर्बको काठ आयात - BirtaJyoti
super userJuly 25, 2019 5:40 am 0
काठमाण्डौ। झट्ट सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ ! मुलुकको कूल भू–भागको झण्डै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको नेपालले वार्षिक साढे ६ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात गर्छ । तर यो कुरा साँचो हो, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विभिन्न मुलुकबाट ६ अर्ब ६० करोड ६१ लाख ३९ हजार रुपैयाँको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको छ ।
वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेशका जङ्गलमा २०० देखि ५०० वर्ष पुराना सालका रूखहरू छन् जबकि सालको रूखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो । मन्त्रालयको पछिल्लो वन सर्वेक्षणअनुसार वन र बुट्ट्यान क्षेत्र गरी नेपालमा ६६ लाख १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र (मुलुकको कूल भू–भागको ४४.७४ प्रतिशत) रहेको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले मदिरा उत्पादन, बिक्री, सेवन र विज्ञापनमा कडाइ गर्ने भएको छ । यसका लागि मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश–२०७५ ... Read More
अाज जनैपूर्णिमा, गरिँदैछ रक्षाबन्धन
admin- August 26, 2018
झापा । श्रावण शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् जनैपूर्णिमा र रक्षाबन्धन पर्व। द्विजातिहरूले नयाँ जनै लगाएर र हातमा रक्षाबन्धन गरी मनाउँदैछन्। बिहान सबेरै उठी पवित्र नदी,तलाउ आदिमा स्नान ... Read More
महिला हिंसाको विरोधमा सयौं महिला सडकमा
बिर्तामोड । पछिल्लो समय समाजमा बलात्कारका घटना बढेका कारण योसँगै महिला हिंसा अन्त्यको माग राख्दै झापाका महिला तथा मानव अधिकारकर्मीहरुले आज सडक तताएका छन् । ... Read More
NEWER POSTझापामा एउटै घर भेटियो २७ वटा गोमन सर्प !
OLDER POSTफेरि उदाए रवीन कोइराला
१५ दिनमै पाँचपटक बढ्यो सिमेन्ट र छडको मूल्य
अबैध रुपमा भारतबाट नेपाल भित्राईदै गरेको कुखुरा नष्ट गरेको छ